#क्युबा Archives - Left Review Online
समाजवाद र क्युवाली मानव
क. चे ग्वेभारा २०७६ माघ १७ गते शुक्रवार
प्रिय साथी, हुन त टिप्पणी लेख्न अलि ढिलो भइसकेको छ, तापनि आफ्नो बाचा पूरा गर्ने आशासहित मैले अफ्रिकाको यात्राको क्रममा यी टिप्पणीहरु लेखिरहेको छु । माथि उल्लेखित शीर्षकअनुरुप टिप्पणीहरु लेख्ने प्रयत्न गर्नेछु । मलाई आशा छ – पाठकहरुका लागि यो रुचिकर हुनेछ । हामी समाजवादको निर्माणमा उद्यत छौं...बाँकी
#क्युबा#क्युवा#चे ग्वेभारा#फिडेल क्याष्ट्रो#मानव#समाजवाद
#Cartoon#UN#US Embargo against Cuba#कार्टुन#क्युबा#नाकाबन्दीVoting
समाजवादी भूमण्डलीकरण बारे
क. फिडेल क्यास्ट्राे २०७५ असोज २४ गते बुधवार
मेरा विचारमा भूमण्डलीकरण कसैको सनक होइन । यो कसैको आविष्कार पनि होइन । भूमण्डलीकरण इतिहासको नियम हो । यो उत्पादक शक्तिहरूको विकासको परिणाम हो । यो वैज्ञानिक र प्राविधिक विकासको परिणाम हो । यो कुनै नयाँ चीज होइन । यो पहिला पनि हुँदै आएको हो । अहिले यसमा...बाँकी
#Globalisation#Socialist Globalisation#क्युबा#नवउदारवाद#फिडेल क्यास्ट्रो#भूमण्डलीकरण#विश्वव्यापीकरण#समाजवादी भूमण्डलीकरणCubaFidel CastroNeoliberalism